Hurumende Yoronga Kubatsira Makanzuru Ayo Otadza Kuita Mabasa neNyaya yeCoronavirus
Vagari vekwaMutare vachitsvaga mvura
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu, VaJuly Moyo vanoti hurumende ine hurongwa hwekurerutsa matambudziko ari kusangana nemakanzuru ose munyika ekushaya mari yekushandisa mukuita mabasa awo uye kutambirisa vashandi zvichitevera kugara mudzimba kwevazhinji avo vave kushaya mari yekubvisa mitero.
Hurumende yakatiwo vanoroja vambomira kubhadhara mari dzekuroja parizvino kana vakaomerwa vozobvisa zvishoma nezvishoma.
Vachitaura neStudio 7 vari parunhare, VaMoyo vati pane hurongwa huri kugadzirwa nehurumende hwekuwawanira mari maguta ose nemakanzuru madiki kuti abatsirikane.
Mashoko aVaMoyo anotevera kuchema-chema kwemakanzuru emunyika achiti ave kukundikana kuita mabasa uye kupa vashandi vavo mari dzemihoro. Mukuru wesangano reZimbabwe Local Government Association VaGuy Mutasa vaudza Studio 7 i kuti vakatarisana nematambudziko akati kuti.
VaMutasa vanoti makanzuru ose munyika ari kuremerwa nekuti awane zvikwanisiro zvinodiwa zvakaita semishonga nezvipfeko zvinodzivirira kutapurirana coronavirus.
Meya weguta reMutare VaBlessing Tandi vanotiwo kanzuru yavo haina mari sezvo zvichitaridza kuti vagari vange vasina fungidziro yekuti vachanzi vagare mudzimba.
VaTandi vanoti kanzuru yavo mwedzi wapfuura yakatokwanisa kubhadhara chidimbu chemari inotambirwa nevashandi vavo sezvo vari kuwanawo mari inosvika zvikamu gumi kubva muzana kuvagari semitero.
VaTandi vanoti kanzuru yavo inosungirwa kunge ichiwana mari inoita mamiriyoni masere emadhora mwedzi wega wega kubva kuvagari ukuwo vashandi vavo vose vachida mari inosvikawo miriyoni imwechete nezviuru mazana masere emadhora pamuhoro ($1,8million) pamwedzi.
Meya weMasvingo VaCollin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo kuburikidza nesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe rinova mubatanidzwa wemakanzuru ose munyika vakakumbira rubatsiro nekuti vave kutatarika.
makanzuru anosvika makumi maviri nemasere; matanhatu ari emaguta makuru, gumi ari emaguta madoko, mamwe masere ari etumadhorobha kuchizoti mana ari aya anonzi maLocal Boards.
Zvichakadaro, vanhu vakawanda maMutare vari kutambira kurudziro yehurumende yekuti vazvivhare muromo nemhuno kana kuti kupfeka mamask pose pavanosangana neveruzhinji. Izvi zviri kuitwa muzvitoro uye kumisika.
Mapurisa ekanzuru ari kumusika kuona kuti vanhu vatevera mutemo. Zvimwe zvitoro zviri kugezawo vanhu maoko nemushonga kana kuti hand sanitizer kuyedza kudzivirira kupararira kwecoronavirus.